Football-Cafe | နှစ်ဆန်းသစ်
"Football-Cafe" မှ သတင်းများ
ကာကာ အား ယုံကြည်မှု့ရှိနေကြောင်းနှင့် အာမခံချက် ပေးလိုက်သည့် မော်ရင်ဟို
258 ရက်ခန့်, Football-Cafe
ကာကာရောက်ရှိခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်အတွင်းမှာ မည်သို့ပင် အခတ်အခဲများဖြင့် ပိနေခဲ့ပါစေ အသင်းမှာ ဆက်ပြီး နေထိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက် ရှိနေသည်ဟု ရီးရဲလ်မတ်ဒရစ် နည်းပြ ဂျိုစ့်မော်ရင်ဟိုက ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သည် ။အေစီမီလန်မှ မြင့်မားသောပြောင်းရွေ့ကြေးဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့သူ ကာကာ သည် ဒဏ်ရာပြသနာများဖြင့် အဓိက လုံးပမ်းခဲ့ရပြီး ရီးရဲလ်တွင် အဓိက ကစားသမား အဖြစ် ရှင်သန်ခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ပေ…
လီဗာပူးလ်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဒယ်လ်ပီယာရို ဘာလို့ ပယ်ချလိုက်တာလဲ?
260 ရက်ခန့်, Football-Cafe
ဂျုဗင်တပ်စ် သူရဲကောင်း ဒယ်လ်ပီယာရိုသည် အင်္ဂလန် နာမည်ကြီး ကလပ် လီဗာပူးလ် အသင်း၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ပယ်ချကာ သြစတေးလျကလပ် ဆိုက်ဒီကို (၂)နှစ် စာချုပ်ဖြင့် ပြောင်းရွေ့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ဒယ်လ်ပီယာရို အနေဖြင့် နာမည်ကြီး အသင်း၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ပယ်ချခဲ့သည့်…
မန်ယူပဲ့ကိုင်ရှင် နေရာကို ဆက်ခံမယ့် သူအတွက် လှုပ်ရှားနေပြီလော ဖာဂူဆန် ?
မန်ယူနည်းပြ ဖာဂူဆန်သည် လာမည့် ရာသီအကုန်တွင် မန်ယူနည်းပြ နေရာမှ အနားယူ တော့မည်ဟု နွေရာသီ အားလပ်ရက်က ပြောကြား သွားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းနေရာအား မည်သည့် နည်းပြဖြင့် အစားထိုးမည် ဆိုသည်ကိုမူ မစဉ်းစားရသေးကြောင်း သိရသည်။…
အပြောင်းအရွေ့ ကာလက စီရော်နယ်ဒိုကို ယူရိုသန်း(၂၀၀)ဖြင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် စီးတီး
မကြာသေးမီရက်ပိုင်းက ပိတ်သွားပြီ ဖြစ်သည့် အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက်တွင် မန်စီးတီး အသင်းသည် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် စတား စီရော်နယ်ဒိုအား ယူရိုသန်း(၂၀၀)ဖြင့် ကမ်းလှမ်း ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သို့သော်လည်း ရီးရဲလ် ဥက္ကဌက ပယ်ချလိုက်ကြောင်း သိရသည်။…
ဘာစီလိုနာမှာ မပျော်တော့ဟု ဖွင့်ဟလိုက်သည့် ဖာဘရီဂတ်စ်ကို ခေါ်ယူရန် ကြိုးပမ်းလာသည့် မန်ယူနှင့် ပီအက်စ်ဂျီ
ဘာစီလိုနာ စတား ဖာဘရီဂတ်စ်သည် နည်းပြသစ် လက်ထက်တွင် အရံခုံ ရောက် နေသောကြောင့် နူးကမ့်တွင် မပျော်ရွှင်တော့ကြောင်း ဖွင့်ဟ လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်သစ်ကလပ် ပီအက်စ်ဂျီနှင့် မန်ယူအသင်းတို့က ဖာဘရီဂတ်စ်အား ခေါ်ယူရန် ပြင်ဆင်လာကြသည်။…
တိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ မန်ယူရဲ့ နစ္စတယ်လ်ရွိုင်း လက်သစ်လား ဗန်ပါစီ?
ပြိုင်ဘက် အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းစက် ဗန်ပါစီကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆန်ရဲ့ ခေါ်ယူမှုဟာ အံ့ဖွယ် တိုက်ဆိုင်မှုတွေ တွေ့လာခဲ့တာကို ပရိတ်သတ်တွေ အနေနဲ့ သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ဆိုင်မှုကတော့ တကယ့်ကို ပုံတူကျတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခု ဖြစ်နေတော့ လုပ်ယူထားသလားလို့တောင် ထင်မှတ်ယူရပါတယ်။…
အက်ရ်ှလေကိုးအား အလိုရှိသော အသင်းများ အနေဖြင့် လာမည့် ဇန်န၀ါရီတွင် အလွတ် ပြောင်းရွေ့ ကြေးဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်တော့မည်
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘယ်နောက်ခံလူများထဲမှာ တစ်ယောက်ဖြစ်သော ချဲလ်ဆီး နောက်ခံလူ အက်ရ်ှလေကိုးအား အလိုရှိသော အသင်းများအနေဖြင့် လာမည့်ဇန်န၀ါရီတွင် အလွတ်ပြောင်းရွေ့ကြေးဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ချဲလ်ဆီး သူဋ္ဌေး အေဗရာမိုဗစ်ခ်ျ၏ ပေါ်လစီကြောင့် အက်ရ်ှလေကိုးအနေဖြင့် စာချုပ်သက်တမ်း တိုးတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။…
စီးတီးအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်သည့် စီရော်နယ်ဒို… သို့သော်…
261 ရက်ခန့်, Football-Cafe
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် စတား စီရော်နယ်ဒိုသည် ဘာနေဗျူးတွင် မပျော်ရွှင်တော့ကြောင်း ဖွင့်ဟ အပြီးတွင် ယူနိုက်တက်၏ မြို့ခံ ပြိုင်ဘက် မန်စီးတီး၏ စိတ်ဝင်စားမှုအတွက် လမ်းဖွင့်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ စီရော်နယ်ဒိုသည် ရီးရဲလ်အတွက် အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြ ပေးနေသော်လည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် အသင်းတွင် မပျော်ရွှင်တော့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။…
အာရှာဗင်ကို အလွတ်ပြောင်းရွေ့ကြေးဖြင့် ထွက်ခွာခွင့် ပြုတော့မည့် အာဆင်နယ်
အာဆင်နယ်သည် ရုရှားအသင်းခေါင်းဆောင် အာရှာဗင်ကို အလွတ်ပြောင်းရွေ့ကြေးဖြင့် ထွက်ခွာခွင့် ပြုတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟသွားခဲ့သည်။ Telegraph၏အဆို အရ အာဆင်နယ်သည် အာရှာဗင်အား ရုရှား အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက် မပိတ်မီ ပြောင်းရွေ့ သွားစေလိုကြောင်း သိရသည်။…
Overweight ဖြစ်နေတဲ့ ဘန်တနာကို ဂျုဗီက စိတ်ပျက်
အာဆင်နယ် အသင်းမှ အငှားစာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ထားသော ဘန်တနာကို ဂျုဗီတပ်စ်က ကစားသမား တစ်ယောက် ရှိသင့်သော အလေးချိန်ထက် ပိုနေသောကြောင့် စိတ်ပျက် လျက်ရှိနေကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်သည်။…
ဟော့လ်ခ်နဲ့ ၀စ်စတယ်လ်ကို ယူရိုသန်း (၈၀) အသုံးပြုပြီး အံ့ဖွယ် ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ ဇင်းနစ်
263 ရက်ခန့်, Football-Cafe
ရုရှားကလပ် ဇင်းနစ်သည် ပေါ်တို တိုက်စစ်မှုး ဟော့လ်ခ်နှင့် ဘင်ဖီကာ စတား ၀စ်စတယ်လ်တို့ နှစ်ဦးအတွက် ယူရိုသန်း (၈၀) အသုံးပြုကာ ခေါ်ယူ လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။…
ဆောက်သမ်တန်အား နောက်ကျဂိုးများဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သော ပွဲစဉ်အပြီး ဖာဂူဆန်၏ မှတ်ချက်
264 ရက်ခန့်, Football-Cafe
ဆောက်သမ်တန် အသင်းအား နောက်ကျဂိုးများဖြင့် အဝေးကွင်းတွင် အနိုင် (၃)မှတ် ရယူ ခဲ့သော ပွဲစဉ်အပြီးတွင် မန်ယူနည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်က ပွဲစဉ် အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်စကား ပြောကြား သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပွဲစဉ်တွင် မန်ယူ အသင်း၏ တိုက်စစ်မှုးသစ် ဗန်ပါစီက ဟက်ထရစ် ရယူသွားခဲ့သည်။…
မော်ရင်ညိုကို "ဒက်ဒီ" လို့ ခေါ်တယ်လို့ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ အက်ဆီယန်
265 ရက်ခန့်, Football-Cafe
Deadline Day တွင်ချဲလ်ဆီးအသင်းမှ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်သို့ အငှားစာချုပ်ဖြင့် ပြောင်းရွေ့ ရောက်ရှိသွားသော မိုက်ကယ် အက်ဆီယန်သည် ဆရာဟောင်း ဖြစ်သူ မော်ရင်ညိုအား “ဒက်ဒီ” ဟု သုံးနှုန်းသွားခဲ့သည်။…
အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက် အတွင်း အစွံမထုတ်နိုင်ခဲ့သည့် မိုက်ကယ်အိုဝင်
လီဗာပူလ်းနဲ့ အင်္ဂလန်ရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ မိုက်ကယ်အိုဝင်ဟာ ယခုနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှ အလွတ်ပြောင်းရွေ့ခွင့် နဲ့ ထွက်ခွာခွင့် ရခဲ့ပေမယ့် ယမန်နေ့က ပိတ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ယခုနှစ်ရဲ့ transfer window အတွင်း မည့်သည့် ကလပ်အသင်းနှင့် မှ ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပဲ အသင်းလက်မဲ့ဖြင့် အဆုံးသတ်သွား ခဲ့ရပါတယ် ။…
မီလန်အတွက် ရာနှုန်းပြည့် ပေးဆပ်ပြမယ်ဆိုသည့် ဒီဂျောင်း
ကျွန်တော် မီလန်အသင်းအတွက် (၁၀၀%) ပေးဆပ်ပြမယ် ဟု အေစီမီလန်ရောက် ဒီဂျောင်းက ကြွေးကျော်လိုက် သည် ။အဆိုပါ နယ်သာလန် ကွင်းလယ် ကစားသမားသည် အပြောင်းအရွေ့ နောက်ဆုံး အချိန်များတွင် မန်စီးတီးအသင်းမှ မီလန်သို့ (၃) နှစ်စာချုပ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း လည်းဖြစ်သည် ။…
Deadline day မှာ ဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွေ့များ
အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက်ကြီး ပိတ်မယ့် သြဂုဏ်လ(၃၁)ရက်နေ့ ၁၂ နာရီအတွင်း နောက်ဆုံးနေ့မှာ ဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွေ့ စာရင်းကို Football Cafe’ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။…
စပါးအသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းချင်တဲ့ ကျွန်တော် ဆန္ဒကို လေးစားပေးပါ….၀ီလျှံ
273 ရက်ခန့်, Football-Cafe
ကျွန်တော် ကမ်းလှမ်းချက် တစ်ခုရထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသင်းဘုတ်အဖွဲ့ကြောင့် ကျွန်တော် ပြောင်းရွေ့မှု ရှုပ်ထွေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအသင်းမှာ ကစားသမား အများစုက ကစားရတဲ့ နေရာတူ နေပါတယ်။ အများစုက ဘရာဇီး ဘောလုံးသမားတွေပါပဲ။ သူတို့ ကစားသမားတွေကို ၀ယ်ထားပြီး ထွက်ခွာခွင့် မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒီအချက်က ပြသာနာပါ။…
သတင်းတိုထွာ ဘောလုံးကမ္ဘာ ( သောကြာနေ့ည နောက်ဆုံးရ သတင်းများ )
ဗဟိုခံစစ် အားနည်းနေခဲ့သည့် ဆောက်သမ်တမ် အသင်းသည် ဂျပန်လက်ရွေးစင် Maya Yoshidaအား ပေါင်(၂)သန်း ၀န်းကျင်ဖြင့် ဒတ်ခ်ျအခြေစိုက် VVV-Venlo အသင်းမှ ခေါ်ယူနိုင် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၎င်းသည် လန်ဒန်အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲဝင် ဂျာပန်အသင်းတွင် ပါဝင်ကစား ခဲ့ကာ အီဂျစ်အသင်းနှင့်ပွဲတွင် ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး နယူကာဆယ်၊ စတုတ်၊ အဲဗာတန်၊ ဖူးဟမ်း အသင်းတို့မှ အလိုရှိခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။…
274 ရက်ခန့်, Football-Cafe
ဆန်းဒါးလန်းအသင်းသည် မန်စီးတီးတွင် နေရာမရဖြစ်နေ၍ အသင်းမှ ထွက်ခွာလိုသည့် အဒန်ဂျွန်ဆင်အား ပေါင်(၁၀)သန်းဖြင့် ခေါ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဆန်းဒါးလန်း အသင်းသည် ၀ုဗ်အသင်းမှ စတီဗင်ဖလက်ချာအား ခေါ်ယူရန် အတွက် ပြောင်းရွေ့ကြေးကို ညိုနှိုင်းနေရကြောင်း သိရှိရသည်။ ဖလက်ချာအတွက် ၀ုဗ်အသင်းမှ ပေါင်(၁၅)သန်း အလိုရှိနေသော်လည်း ဆန်းဒါးလန်း အသင်းမှ ပေါင် (၁၂)ဖြင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။…
275 ရက်ခန့်, Football-Cafe
အာဆင်နယ်အသင်းသည် ရီးရဲအသင်းမှ ဆာဟင်အား တစ်ရာသီအငှား စာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အကယ်၍ အာဆင်နယ် အသင်းသာ ဆာဟင်အား လာမည့်နှစ်တွင် အပြီးသတ် ခေါ်ယူချင်ပါက ပေါင်၁၄သန်းဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ကြောင်း ယခုအငှားစာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။…
ယူနိုက်တက်နှင့် (၄)နှစ်သက်တမ်း စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ၀ဲလ်ဘတ်တွင် တောက်ပသည့် အနာဂါတ်များ ရှိနေမည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည့် ဖာဂူဆန်
၀ဲလ်ဘတ်ဟာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာလည်း အရေးပါတဲ့ ကစားသမား တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါပြီး။ သူရဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ ခြေစွမ်းကို ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာလည်း ပြသနိုင်ခဲ့ပါပြီး။ ဒီနှစ်ကတော့ သူအတွက် အခြားအရေးပါတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ သူမှာ တောက်ပတဲ့ အနာဂါတ်တွေ ရှိနေပါတယ်……
ဘောလုံးလောကကြီး ရူးသွပ်သွားပြီလို့ ဝေဖန်ခဲ့သော ဖာဂူဆန်ကို ဒါဟာ စီးပွားရေး ဈေးကွက်ရဲ့ နိယာမလို့ ပြန်လည်တုန့်ပြန် လိုက်တဲ့ အန်ဆယ်လော့တီ
276 ရက်ခန့်, Football-Cafe
နောက်တန်းပြဿနာကို ဆေးမြီးတိုဖြင့် ကုစားရန် ပြင်ဆင်လာသည့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
နောက်ခံလူ ဒဏ်ရာ ပြဿနာဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်သည် ဆေးမြီးတိုနည်းလမ်းဖြင့် ကုစားရန် ပြင်ဆင်လာသည်။ နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့တွင် တိုက်စစ်အင်အား ဖြည့်တင်းခဲ့သော မန်ယူအသင်းသည် နောက်ခံလူ အများအပြား ဒဏ်ရာပြဿနာဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။…
အဖွင့်ပွဲ အရှုံးအတွက် စိတ်ဓါတ်မကျပဲ ရှေ့ပွဲစဉ်ကို အာရုံစိုက်ရန် အသင်းဖော်များကို တိုက်တွန်းခဲ့သည့် ဗီဒစ်
ဒီပွဲက ပွဲကောင်းတစ်ပွဲ မဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ရှေ့လာမယ့်ပွဲအတွက် ကျွန်တော်တို့ အာရုံစိုက်သွားမှာပါ။ အရင်တုန်းကလဲ ကျွန်တော်တို့ ရာသီအဖွင့်ပွဲမှာ ရှုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ ရာသီကုန်ဆုံးချိန်မှာ အဆုံးသတ် ကောင်းခဲ့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လာမယ့်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိပြီး……
အဲဗာတန်နှင့်ပွဲတွင် ဗန်ပါစီ၏ စွမ်းရည်များကို ထုတ်ယူနိုင်မှု့ မရှိခဲ့ဟု ဖာဂူဆန်ပြောကြား
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆြာအဲလက် ဖာဂူဆန်က အဲဗာတန်အသင်းအား ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည်တွင် ဗန်ပါစီ၏ စွမ်းရည်ကို လုံလောက်စွာ သုံးခွင့်မရလိုက်ခြင်းသည် လည်း အကြောင်းရင်း တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ပွဲအပြီးတွင် ပြောဆိုသွားသည် ။…
ကစားသမားသစ်တွေနဲ့ ယူနိုက်တက်ကို ဂွဒ်ဒီဆန်ပတ်ခ်မှာ အဲဗာတန်တို့ ဘယ်လိုဧည့်ခံမလဲ? ( အဲဗာတန် Vs မန်ယူ)
277 ရက်ခန့်, Football-Cafe
အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၁)ရဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်အနေနဲ့ အဲဗာတန်နဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းတို့ ဂွဒ်ဒီဆန်ပတ်ခ်မှာ ရင်ဆိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်အသင်း အနေနဲ့ ကစားသမားသစ် ကိုယ်စီနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ကြမှာ ဖြစ်လို့ ပွဲစဉ်(၁)ရဲ့ စိတ်ဝင်စား စရာ အကောင်းဆုံး ပွဲတစ်ပွဲလို့ပဲ ဆိုရမယ်။…
သရဲနီကြီး လိမ္မော်ရောင် ပြောင်းတော့မယ် (ဗန်ဒါဆား)
278 ရက်ခန့်, Football-Cafe
မန်ယူအသင်း၏ ဂန္တ၀င် ကစားသမား ဟော်လန် လက်ရွေးစင်ဟောင်း အက်ဒ၀င် ဗန်ဒါဆားက မန်ယူအသင်း၏ ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူမှုကို လွန်စွာ နှစ်ထောင်း အားရကြောင်း ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် တွစ်တာ စာမျက်နှာ တွင် ရေးသား ဖော်ပြသွားခဲ့သည်။…
အပြောင်းအရွေ့မှာ လက်သွက်နေတဲ့ မန်ယူရဲ့ နောက်ထပ် ခေါ်ယူမှု တစ်ခု
ဗန်ပါစီ၊ အန်ဂျယ်လိုနှင့် ကာဂါဝါတို့ကို ခေါ်ယူအားဖြည့် ထားပြီး ဖြစ်သော မန်ယူအသင်းသည် ဘယ်နောက်ခံလူ တစ်ဦးဖြစ်သော အလက်ဇန္ဒား ဘတ်တာကို ခေါ်ယူရန် သဘောတူညီမှု ရရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။…
၂၀၁၃-၁၄ ရာသီအကုန်မှာ ဘောလုံးလောကမှ အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်
မန်ယူအသင်း၏ သက်တော်ရှည် ဂန္တ၀င်နည်းပြကြီး ဆာဘွဲ့ရ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်သည် ၂၀၁၃-၁၄ ဘောလုံးရာသီ အကုန်တွင် ဘောလုံးလောကမှ အနားယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြား လိုက်သည်။…
မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး စာပေလက်ရာများ (ဂန္တ၀င်စာဆိုတော်ကြီးများ)
ရန်ကုန်တွင်တက္ကစီများကို On Call စနစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်မည်
မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကို ဆွေးနွေး
ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များ မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်ရှိ
Toy Story Smash It! v1.1.0 Apk Game (37.8 Mb)
လဝက ဝန်ထမ်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သူများ စစ်တွေတရားရုံးမှာ အမှုစစ်ဆေး
Olive PDF Tools-V.1.00- Apk-(3Mb)
Fokker (Wanted) Go Locker Theme
Edjing PRO DJ Mixer Turntables V1.2.1 Apk-(19Mb)
သိမ်းထားတဲ့မြေတွေ ပြန်စစ်ဆေး မှု အင်တောဒေသခံတွေကြား မကျေနပ်